Ukuphefumula ngexesha lokukhulelwa
Ngexesha lokukhulelwa, ukulawulwa kwezilwanyana ezingenasidingo kuya kuba nzima kakhulu. Inyaniso kukuba emzimbeni, ngenxa yokuveliswa kwemveliso ye-hormone, iinwele ziqala ukukhula ngokukhawuleza. Ngokuba iinwele zentloko ngokuqinisekileyo zidibeneyo. Kodwa kuthekani ngamanye amacandelo - imilenze, i-armpits, i-bikini zone? Indlela yokujongana nemifuno ecasulayo? Ngaba ndingasebenzisa iindlela eziqhelekileyo ngexesha lokukhulelwa?
Ukupasa, ngokungafani nokuhlutha, kulwa kakhulu neenwele, kususe kunye neengcambu. Ukuba kusebenza ngakumbi - emva kokuba izityalo zingabikho kude kube kwiiveki ezi-2.
Phakathi kweendlela zokwehliswa - ukususela kwi-banal plucking ne-tweezers ukunyuswa kweenwele nge-laser. Enyanisweni, ukuxhoxwa kulungele iilishi. Kweminye imimandla ikulungele ukusebenzisa i-epilator yendlu . Ngokukhawuleza uyakhupha iinwele kunye neenkwenkwezi zakhe ezincinci. Le fowuni ikulungele kwaye idibeneyo. Ungayisebenzisa ekhaya kwaye uyithathe kunye nawe ukuphumla. Inkqubo ayithathi ixesha elide, kwaye umphumo - ubuncinane iveki yeenwele ayiyi kukukhathaza.
I-Electroepilation yindlela efanelekileyo. Yenza izinwele zibe zincinci kwaye zibuthathaka. Nangona kunjalo, le nkqubo iqhutyelwa kuphela kwiirononi ngoncedo lwezixhobo ezizodwa.
I-bioepilation (ngendlela elula, ukukhishwa kweenwele ze-wax ngexesha lokukhulelwa) yindlela enye yekhaya. Nangona kunjalo, ezininzi iironi zenza i-bio-epilation. Kubonakala ngathi akukho mfuneko yokuchaza indlela ngendlela ecacileyo, kuba zonke iintombazana ubuncinane zakuba nazo.
Kwaye ekugqibeleni - ukususwa kweenwele zelasi. Abaninzi abasetyhini abakhulelweyo bayazibuza ngokukhuseleka kokukhutshwa kweenwele ze-laser ngexesha lokukhulelwa. Kodwa ekukhuseleni kwakhe, ungatsho ukuba akuyingozi ngaphezu kwe-electrolysis. Kodwa ngaba ikhuselekile ngokubanzi kubafazi abakhulelweyo?
Ngaba ndiyakhulelwa ukunyuswa kweenwele?
Ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nokunyuswa kweenwele ngexesha lokukhulelwa, kufuneka ulandelele ingozi kunye nomphumo osalindelekileyo. Khumbula ukuba abafazi abakhulelweyo banomdla wokuziphendulela. Yaye kunye neenkqubo oye wazixhaphazela ngokuqhelekileyo, ngoku zinokubangela ukucaphuka, ubomvu nezinye iingxaki. Ukongezelela, phawula ukuba nayiphi na ukulimala okuqhubekayo ngexesha lokukhulelwa, uphilise ixesha elide. Ngoko ke, okokuqala kufuneka ulahlekelwe ngcamango ye-electro-epilation.
Kufuneka kuqondwe ukuba nayiphi na imizwa engathandekiyo, kuquka intlungu, ayikwazi ukunceda kodwa ichaphazela impilo yonke yomama. Ngexesha leentlungu, i-hormone yokuxinwa ikhutshwa kwigazi. Uyaqonda, ukuba nayiphi na ingcinezelo kubafazi abakhulelweyo bayazilimaza. Ngoko ke, kungcono ukushiya iindlela ezibuhlungu zokuhlutha.
Mhlawumbi kubaluleke kakhulu: abaninzi abafazi abakhulelweyo bajamelana nengxaki yeemvini ze-varicose. Kwaye kwiindawo zokuvuvukala kweemvini nendlela yokuphuma kwayo, akukho mfuneko ukuba usebenzise nayiphi na inkunkuma yokususwa kweenwele.
Ngayiphi na isifo sekhumba, kufuneka uyeke ukuhlutha kuze kube yilapho sele iphela. Ngokukodwa, lumkele ukubonakaliswa kwe-atopic dermatitis, edla rhoqo xa ibhinqa lisendaweni ekhangayo. Kwakhona, phakathi kokuchasene nokugqithwa kunokuthiwa njengeengxaki ezinjengeendlela ezinzima ze- herpes , izibazi ezixakazelayo, izifo ezithathelwanayo, isifo sikashukela, isifo soxinzelelo olubi, ukugula kwengqondo.
Ziziphi iimpawu zokukhulelwa kwe-ectopic?
Ikhefu kwindonga yangasemva - ukuthini oku kuthetha ntoni?
Ii-Vitamins kubafazi abakhulelwe: 2 trimester
Quince ngexesha lokukhulelwa
Ubhubhane bunzima ngexesha lokukhulelwa
Ithoni yesibindi kwi-trimester yokuqala
I-leukocytes kwi-smear ngexesha lokukhulelwa
Derinat ngexesha lokukhulelwa
Ama-Multivitamine kubafazi abakhulelweyo
Ubunzima ngexesha lokukhulelwa
Ikhukhi kunye neetyhokolethi
Yintoni onokuyifumana esuka eColombia?
Abagadi beCardigans abaNazileyo ngo-2013
Nguwuphi umbala owenziwe kwimovie ehlobo ka-2015?
Ubuso bendlu - bugqiba
Abantu abadumileyo bawubhiyozela i-cabaret Crazy Horse
Isobho seklabishi elomileyo
I-Pink eneenkwenkwezi ezinqambileyo ezinqabileyo
Iimpahla zangaphandle zabasetyhini - ekwindla ngo-2016
Nguwuphi umbala odibene nomfusa?
Izipikili zendalo - design 2014
Inkukhu kunye nama-mushroom kwi-sauce encinci
Kuphi ikhuni ekhula?
Iingcamango zobuhle besifazane kumazwe angama-22 ehlabathi
Buckwheat kunye ne-yogurt ukwenzela ukudla kwasekuseni
Iwayini esuka e-aronia
Ubudlelwane nomntu otshatileyo
Yintoni iphupha loodade?